မေလ 2018 | 55 ၏စာမျက်နှာ 109 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » မေ (စာမျက်နှာ 55)
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း & Motion Graphics Internship
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး & Motion Graphics Internship ကုမ္ပဏီ: ကို Creative Visual Productions တည်နေရာ: အနောက် Deptford NJ အမေရိကန်ကို Creative ဗီဒီယိုလက်ရှိ3လကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု & ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာဖွေနေသည်။ ကျနော်တို့ကော်ပိုရေးရှင်းကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြပြီးမာလ်တီမီဒီယာထုတ်လုပ်မှု, အပြန်အလှန်မဟာဗျူဟာ, ကို web ဒီဇိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာမဟာဗျူဟာအတွက်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။ ကို Creative ဗီဒီယိုရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာ ...
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း Internship - ရာသီအလိုက်
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Internship - ရာသီအလိုက်ကုမ္ပဏီ: Verlo မွေ့ယာကော်ပိုရိတ်ရုံးတည်နေရာ: Milwaukee WI အမေရိကန်ဤနေရာသို့သွားရန် onboard! တစ်မူထူးခြားသောအလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အပြုသဘောနှင့်လုံ့လရှိသူပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကို Join ။ ပျော်စရာများနှင့်ပြောင်းလဲနေသောရုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်! Verlo မွေ့ယာစျေးကွက်၏ VP မှအစီရင်ခံသည်ဤအနေအထားကိုနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး International ရှာကြံနေပါတယ်။ ဒါကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ...
ရာထူး: ဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: Jakks ပစိဖိတ်တည်နေရာ: စန်တာမော်နီကာ, CA အမေရိကန် JAKKS ပစိဖိတ်, Inc, 1995 ကတည်းကန်းကျင်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ကစားစရာ, အပန်းဖြေထုတ်ကုန်များနှင့်အရေးအသားတူရိယာ, ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ထုတ်လုပ်နှင့်စျေးကွက်ထားပြီးအကြောင်း, multi-အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီ ကမ္ဘာကြီးကိုလက်ရှိခြုံငုံထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း / အထုပ်ဒီဇိုင်း directing နှင့်အယူအဆအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအချိန်ဇယားကိုထိန်းသိမ်းဘို့တာဝန်ရှိတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာကိုရှာတတ်၏ ...
ရာထူး: ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: tubular Labs ကတည်နေရာ: Mountain View, CA အမေရိကန်အွန်လိုင်းကဗီဒီယိုပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံး၏နှုန်းထားများအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဆကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ tubular Labs ကဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကတော်လှန်ရေး၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် Twitch, 4B ဗီဒီယိုများ, 11M ဖန်တီးသူနှင့် YouTube, Facebook, အပါအဝင်ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုထက်ပိုခြေရာခံ ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအထူးကုကုမ္ပဏီ: ဆန်နီကျွန်းကမ်းခြေတည်နေရာ၏စီးတီး: ဆန်နီကျွန်းကမ်းခြေ FL အမေရိကန် DESCRIPTION ရာထူးအနှစ်ချုပ်: SIB တီဗီ, SIB ရေဒီယိုနှင့်ဝက်ဘ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအဘို့ပရိုဂရမ်းမင်း၏ဖန်တီးမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ဆောင်စေရန်, SIB TV နဲ့ SIB ရေဒီယို၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ကူညီ; ဝဘ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများနှင့်အတူကူညီ ...
ကို Creative နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ Talent: များအတွက်လူကြိုက်များဆုပေးပွဲနယူးအုပ်စုများဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA®) ထည့်အဆိုပါ 13th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲအဘို့ကို Creative အုပ်စုများအတွက် Entries များအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤရွေ့ကားဆုအရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်တည်းဖြတ်ရေး, အသံများနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကြော်ငြာများတွင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက်ဖန်တီးမှု artistry အသိအမှတ်ပြု, အလုပ်နှင့်အနုပညာထူးချွန် groundbreaking များအတွက်အရေးကြီးသောအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်ယူဆနေကြသည်။ အဆိုပါ ...
အလွတ်တန်းအချိန်ပြည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်နာ - နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အငယ်တန်းအဆင့်အထိ
ရာထူး: Freelance အချိန်ပြည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်နာ - နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အငယ်တန်းအဆင့်အထိကုမ္ပဏီ: Bumble နှင့် bumble တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန် Bumble နှင့် bumble ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျင်မြန်သွက်လက်နှင့်အသည်းအသန်ဒီဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့ join ဖို့အလွတ်တန်းဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်နာရှာဖွေနေသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အသစ်ဖြန့်ချိက်ဘ်ဆိုက်အဘို့အဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖန်တီးခြင်းအတွက်အပေါင်းတို့နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းများအနှံ့အဓိကရှယ်ယာရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သူတစ်ဦးချင် ...
HOBO "ကေတီ Couric နှင့်အတူအမရေိအတွင်းပိုင်းထဲက" ဟု New National Geographic စီးရီးများအတွက်နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့မှတ်တမ်းတင်ကိုင်တွယ်
New York, NY - ဝါရင့်ထုတ်လွှင့်သတင်းစာဆရာကေတီ Couric, National Geographic သူမ၏နောက်ဆုံးထုတ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီး 11 / 10c မှာဧပြီလ9premieres ထားတဲ့ "ကေတီ Couric, အတူအမေရိကအတွင်းပိုင်းထဲက" အတွက်မှတ်တမ်းတင်နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ကိုင်တွယ်ရန်ဖန်တီးမှုအသံ post ကိုစတူဒီယို HOBO နှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ်စတီဖင်ဒေးဗီးစ်လှည့် ။ ယင်းနောက်တွဲယာဉ်စောင့်ကြည့်ဖို့ကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒေးဗီးစ်သတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင် Couric ၏ caliber အားလုံးအချိန်များတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "ကေတီငါ့ကိုထားရှိမည် ...